काश्मीरमा लक्षित हत्याको छानबिन गर्न भाग, भाइचारा कायम गर्न ग्रान्ड मुफ्तीको आग्रह - Media Dabali
काश्मीरमा लक्षित हत्याको छानबिन गर्न भाग, भाइचारा कायम गर्न ग्रान्ड मुफ्तीको आग्रह
श्रीनगर - काश्मीरमा हालैका लक्षित हत्याहरूको निन्दा गर्दै ग्रान्ड मुफ्ती नसिर-उल-इस्लामले शुक्रबार 'जघन्य अपराध' को छानबिन गर्न माग गरेका छन्। मानिसहरूलाई भाइचारा कायम राख्‍न आग्रह गर्दै उनले प्रत्येक धर्मले प्रत्येक मानिसको सुरक्षामा जोड दिएकोले समुदायहरूबीच शान्ति र सहिष्णुता कायम भएको पनि उनले बताए।
उनले उपत्यकामा आतंककारी आक्रमणबाट भएका हालैका हत्याप्रति दु:ख व्यक्त गर्दै 'काश्मीरमा मानव र मानवताको रगत सस्तो भएको' बताएका छन्। 'इस्लाम, वास्तवमा हरेक धर्मले प्रत्येक मानवको सुरक्षामा जोड दिन्छ। समस्या छ भने समाधान गर्नुपर्छ तर रगत बगाएर समाधान खोज्नु मानवता विरोधी हो। मलाई लाग्छ कश्मीरमा मानव र मानवताको रगत सस्तो बनाइएको छ,' काश्मीरका ग्रान्ड मुफ्तीले भने।
उनले उपत्यकामा काम गर्ने मानिसको सुरक्षा स्थानीय बासिन्दाको दायित्व भएको बताए। 'यसबारे अनुसन्धान गर्नुपर्छ। जबसम्म किन उनीहरु बिहारी मजदुरलाई यस्तो गर्न चाहन्छन्? कानुनी व्यवस्थालाई खलल पुर्‍याउँछन्, उनीहरुको नियत पत्ता लाग्दैन... ? तबसम्म उनीहरुको सुरक्षा हाम्रो (जिम्मेवारी) हो,’ उनले भने।
ग्रान्ड मुफ्तीले समुदायहरू बीचको सद्भाव र भाइचारा कायम गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै हत्याको निन्दा गरेका हुन्। 'हरेक हत्या निन्दनीय छ र यो जघन्य अपराध हो। मलाई यस्ता हत्याको पीडा हुन्छ। हामीले समुदायहरूबीच भाइचारा कायम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मानिसहरूले बुझून् भन्ने म चाहन्छु। हामीले बदमाशहरूलाई अविश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न दिनु हुँदैन,' काश्मीरका ग्रान्ड मुफ्तीले एएनआईलाई भने।
'यस्ता कुराको पछाडि को छ भन्‍ने पत्ता लगाउन हामीले मिलेर काम गर्नुपर्छ। प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्छ,’ उनले थपे।
काश्मीरी पण्डितहरूको सन्दर्भमा उनले भने, 'हामी विगत ३० वर्षदेखि उनीहरुको फिर्ताको बारेमा विलाप गर्दै आएका छौं। अब उनीहरू फर्केका छन् र उनीहरू शान्ति र मर्यादाका साथ हामीसँग बस्नुपर्दछ,' नासिर-उल-इस्लामले भने।
'म यहाँ पूर्ण शान्ति देख्दिन। हो, पर्यटकहरू फर्केका छन्, र काश्मीरमा केही हदसम्म शान्ति फर्किएको छ। तर हामी काश्मीरमा पूर्ण शान्ति र समृद्धि हेर्न चाहन्छौं। तर अवस्था नाजुक छ,’ उनले भने।
सरकारले गत वर्ष जुलाईमा संसदलाई काश्मीरी पण्डितहरूले 'अधिक सुरक्षित' महसुस गरेका छन् र समुदायका ३ हजार ८०० भन्दा बढी युवाहरू प्रधानमन्त्रीको पुनर्वास प्याकेज अन्तर्गत विभिन्न जिल्लाहरूमा काम गर्न काश्मीर फर्किएका छन्।
जम्मु कश्मीरको कुलगाम जिल्लामा बिहीबार एक बैंक म्यानेजर, विजय कुमारको रूपमा चिनिने उनको कार्यालय बाहिर आतंककारीहरूले गोली हानी हत्या गरेका थिए।
यस हप्ताको सुरुमा जम्मूको साम्बा जिल्लाकी ३६ वर्षीया हिन्दू महिला शिक्षिका रजनी बालालाई कुलगामको गोपालपोराको सरकारी विद्यालयमा आतंककारीहरूले गोली हानी हत्या गरिन्। गत महिना, कश्मीरी पण्डित कर्मचारी राहुल भाट सहित दुई नागरिक र तीन अफ-ड्युटी प्रहरीहरू काश्मीरमा आतंकवादीहरुबाट मारिए।
केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले शुक्रबार लेफ्टिनेन्ट गभर्नर मनोज सिन्हा र अन्य शीर्ष अधिकारीहरूसँग जम्मू-काश्मीरको सुरक्षाको बारेमा बैठक गरेका छन्। बैठकमा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र जम्मू कश्मीरका प्रहरी महानिर्देशक दिलबाग सिंह पनि सहभागी थिए।
जम्मु-काश्मीर : एएस कलेजमा एक सातासम्म गान्धी जयंती समारोह
पाकिस्तानको नक्साबाट गलिगिट-बाल्टिस्तान र काश्‍मीर गायब
कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि काश्मीरमा खोप कार्यक्रम तीव
काश्मीरका स्वास्थ्यकर्मीहरु खोप अभियानलाई तीव्रता दिन हिउँको बेवास्ता गर्दै अघि बढे
बुधवार, चैत्र ३० २०७८१०:५७:३०